အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Cele Top Stars
February 1, 2021 By admin2Celebrity
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက အာရှနိုင်ငံတွေမှာပါ ပရိသတ်တွေအများကြီးနဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ကတော့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတာ အားလုံး သိပြီးဖြစ်မှာပါနော် ။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အရမ်းချစ်တတ်တယ်ဆိုတာလည်း ကြောင်လေးခွေးလေးတွေတင်မကပါဘဲ တခြား တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုပါ အရမ်းချစ်တတ်ကြင်နာတတ်တဲ့ သူ တစ်ယောက်ပါ ။
လတ်တလောမှာတော့ ပိုင်တံခွန်က ကျွန်တော့် ကလေးတွေနဲ့ ဒါပထမဆုံး ပရိတ်သတ်ကို မိတ်ဆက်ပေးဖူးတာပါမွေးထားတာတွေက နည်းနည်းတော့ ကြောင်တောင်တောင်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ အိမ်မှာရှိတဲ့ သူချစ်ရတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူ ပ ရိသတ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ ။ ကြောင်လေးခွေးလေးတွေ အပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ငါးလေးတွေရော ရေနဂါးလေးတွေ ၊ ရေဘဝဲ တွေပါ စုံနေအောင် မွေးထားတဲ့အကြောင်း ပရိသတ်တွေကို သေချာလေး ရှင်းပြထားတာပါ ။
ပရိသတ်ကြီးကတော့ ပိုင်တံခွန် ကို ကြောင်တွေ ခွေးတွေ အရမ်းချစ်တယ်လို့ သိထားပေမယ့် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အရမ်းချစ်ပြီး အခုလို မျိုးစုံအောင် မွေးထားလိမ့်မယ်လို့ထင်မထားကြောင်း မှတ်ချက်လေးတွေရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။ ပိုင်တံခွန်ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း သူချစ်တဲ့ ကလေးလေးတွေ အကြောင်းကို ရှင်းပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တဆင့်ပြန် လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. ။
မင်ျဂလာပါ ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာနိုငျငံမှာသာမက အာရှနိုငျငံတှမှောပါ ပရိသတျတှအေမြားကွီးနဲ့ အောငျမွငျကြျောကွားနတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ပိုငျတံခှနျကတော့ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို အရမျးခဈြတတျတဲ့ သူတဈယောကျဆိုတာ အားလုံး သိပွီးဖွဈမှာပါနျော ။ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို အရမျးခဈြတတျတယျဆိုတာလညျး ကွောငျလေးခှေးလေးတှတေငျမကပါဘဲ တခွား တိရစ်ဆာနျလေးတှကေိုပါ အရမျးခဈြတတျကွငျနာတတျတဲ့ သူ တဈယောကျပါ ။
လတျတလောမှာတော့ ပိုငျတံခှနျက ကြှနျတေျာ့ ကလေးတှနေဲ့ ဒါပထမဆုံး ပရိတျသတျကို မိတျဆကျပေးဖူးတာပါမှေးထားတာတှကေ နညျးနညျးတော့ ကွောငျတောငျတောငျနိုငျတယျ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ အိမျမှာရှိတဲ့ သူခဈြရတဲ့ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူ ပ ရိသတျတှကေို မိတျဆကျပေးခဲ့တာပါ ။ ကွောငျလေးခှေးလေးတှေ အပွငျ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ငါးလေးတှရေော ရနေဂါးလေးတှေ ၊ ရဘေဝဲ တှပေါ စုံနအေောငျ မှေးထားတဲ့အကွောငျး ပရိသတျတှကေို သခြောလေး ရှငျးပွထားတာပါ ။
ပရိသတျကွီးကတော့ ပိုငျတံခှနျ ကို ကွောငျတှေ ခှေးတှေ အရမျးခဈြတယျလို့ သိထားပမေယျ့ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို အရမျးခဈြပွီး အခုလို မြိုးစုံအောငျ မှေးထားလိမျ့မယျလို့ထငျမထားကွောငျး မှတျခကျြလေးတှရေေးသားခဲ့ကွပါတယျ ။ ပိုငျတံခှနျကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး သူခဈြတဲ့ ကလေးလေးတှေ အကွောငျးကို ရှငျးပွထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တဆငျ့ပွနျ လညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော…. ။
အသက် (၂၆) နှစ်ပြည့်မြောက်သွားတဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မင်းသားချော စည်သူဝင်း